Barnaamijyada sawirada loogu beddelo sawirro: barnaamijyada ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Xigasho: Xataka Android
Waad ku mahadsan tahay abuurista tifaftirayaasha sawirada badan, waxaa suurtagal ah in sawirka loo rogo sawir cajiib ah. Ama halkii, waxaa suurtogal ah inaan isu arki karno sidii inaan qayb ka nahay taxanaha kartoonka.
Saamayntan avatar-ka ah waxa ay ku suurtoobaysaa qaar ka mid ah qalabka aanu ku tusi doonno qoraalkan. Haddii ay dhacdo inaad garan weydo meesha aad ka heli karto saamayntan, Waxaan kuu dhaafnay liis dheer oo qalab ah oo aad soo dejisan karto ama raadin karto oo sidan ku hel sawir qurux badan sawirka aad rabto ama aad jeceshahay.
1 Barnaamijyada ugufiican
1.1 Sawirada Sawirka Sawirka
1.3 Tifaftiraha Prism
1.4 Sawir Sameeyaha Kartoon
Sawirada Sawirka Sawirka
Picsart waa mid ka mid ah naqshadaynta nuxurka dhijitaalka ah iyo barnaamijyada abuurista kuwaas oo ahaa, sanadihii la soo dhaafay, mid ka mid ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo. Waxay leedahay nooc bilaash ah iyo sidoo kale, haddii aad rabto inaad isku daydo xulashooyinkeeda kale, waxaad sidoo kale bixin kartaa kharash bishiiba waxaadna ku raaxaysan kartaa astaamaha iyo aaladaha.
Waa aalad ku habboon tafatirka sawirka iyo abuurista isku-dhafka. Haddii waxa aad jeceshahay ay yihiin sawir qaadis iyo naqshadayn, waxaad hadda boos uga samayn kartaa kumbuyuutarkaaga ama taleefankaaga gacanta.
Photolab waxaa loo tixgeliyaa qalabka labaad ee loogu isticmaalka badan yahay sawirka adduunka. Waxaad kala soo bixi kartaa labadaba Play Store iyo Mac. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa soo dejiso oo ku rakib app-ka.
Maxaa lagu gartaa Photolab waa noocyada kala duwan ee agabka ay bixiso. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale bixin kartaa qiimo bille ah haddii aad rabto inaad si buuxda ugu raaxaysato codsiga.
Haddii, marka lagu daro sawir-qaadista, sidoo kale aad u heellan tahay adduunka naqshadeynta, barnaamijkan ayaa ku xiiseyn doona maadaama uu kuu ogolaanayaa inaad abuurto gradients iyo textures labadaba dhammaan shaqooyinkaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa burushkeeda kala duwan waxaana lagugu dhiirigelinayaa inaad abuurto sawirro hal abuur leh oo firfircoon mashaariicdaada.
Xigasho: APP luul
Tifatiraha Prisma waa mid ka mid ah codsiyada ay ku jiraan saamaynta oo maamula si ay u beddelaan sawirkaaga sawir farshaxan iyo hal abuur leh. Waad ku mahadsan tahay saameynta kala duwan ee ay bixiso, waxaad u rogi kartaa sawirkaaga qaabab badan oo u dhexeeya sawirada buugaagta majaajillada ee suurtogalka ah ilaa sawir-gacmeedka farshaxanka.
Sidoo kale Waxaa loo heli karaa Android iyo iOS labadaba. Tifaftiraha Prisma sidoo kale waxaa loo arkaa mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee la soo dejiyo bishiiba isticmaalayaasha badan ee internetka.
Sawir Sameeyaha Kartoon
Sawir Kartoon waa mid ka mid ah codsiyada ku habboon in lagu soo dejiyo Play Store. Maxaa lagu gartaa codsigan waa noocyada kala duwan ee filtarrada ay bixiso, habkan waxa kale oo suurtogal ah in la abuuro caricatures suurtagal ah.
Maxaa intaas ka badan. Waxa kale oo loo arkaa mid ka mid ah codsiyada aad ku heli karto in la abuuro avatars u gaar ah iyo kuwa gaarka ah. Hal shay oo maskaxda lagu hayo ayaa ah in kala duwanaanta kala duwan ee soo dejinta ee ay hesho bishii iyo faallooyinkeeda wanaagsan ay ka dhigaan codsigan mid soo jiidasho leh.
BeFunky waa mid ka mid ah abka bixiya filtarrada kala duwan. Tani waxay u oggolaanaysaa isbeddelka sawirka ilaa sawirka inuu noqdo mid guuleysta. Intaa waxaa dheer, waxay sidoo kale leedahay qaabab sawir oo kala duwan: saliid, midab-biyood, iwm.
Waa shaki la'aan waxa aad u baahan tahay si aad u siiso taabasho hal abuur leh sawiradaada.
Rinjiga shaki la'aan waa qalabka xiddigaha oo diyaar u ah iPhone. Waxa kale oo ay leedahay shaandhooyin dhammaystiran oo leh qiime bille ah iyo mid sannadle ah labadaba.
Maxaa lagu gartaa Rinjiyeynta qalabkii hore, shaki la'aan, in ay sidoo kale la shaqeyso xulashada caricature, taas oo sidoo kale u oggolaanaysa hab farshaxan.
Haddii aad khabiir ku tahay sawir-qaadista ama tafatirka sawirka, barnaamijkani wuxuu noqon karaa mid aad kuu xiisa badan. Intaa waxaa dheer, waxaad sidoo kale codsan kartaa qoraalka sawirada marka ay noqdaan sawirro.
Sidaad aragteen, waxa jira kumanyaal iyo kumaankun tifaftirayaasha sawirada ah kuwaas oo aad sawiradaada ugu bedeli karto sawiro. Intaa waxaa dheer, fikradan cajiibka ah kaliya uma adeegto isticmaalka dhinacayada fanka laakiin sidoo kale waxaan u adeegsan karnaa si aan u naqshadeyno sawirada ama muraayadaha suurtagalka ah ka dibna siino asxaabta, lammaanaha, qoyska, iwm.
La shaqaynta codsiyada ilaaliya beta ama ikhtiyaarada daabacaadda bilaashka ah ayaa ka dhigaya mid aad u raaxo badan in lala shaqeeyo. Sida haddii aanay taasi ku filnayn, waxay sidoo kale leeyihiin interface hal abuur leh oo qurux badan.
Sidoo kale, haddii ay dhacdo in liisku u ekaado mid gaaban, Waxa kale oo aad isku dayi kartaa barnaamijyadan soo socda: Watercolor Effect, Photomania, Iftiinka, Dabciga Dijital ah iyo i toon.. Qaarkood sidoo kale waa bilaash, halka kuwa kalena ay u baahan yihiin kharash aad u gaaban bishii ama sannadlaha ah.
Hadda waxa la gaadhay wakhtigii aad nolosha badan siin lahayd sawiradaada oo aad soo saarto dhinaca hal-abuurka ee aad gudaha ku leedahay. Kaliya waa inaad heshaa sawir aad jeceshahay ama aad u aragto mid gaar ah oo isku day qaar ka mid ah barnaamijyada aan soo jeedinay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Barnaamijyada sawirada loogu beddelo sawirro